ကြက်သားချိုချဉ်ကြော် | Wutyee Food House
« တန်ပူရာ ဂဏန်းပျော့ကြော်
June 1, 2010 by chowutyee ကြက်သားချိုချဉ်ကြော်
၁။ ကြက်ရင်ဗုံသား (သို့) ၀က်သား – ၁၅ကျပ်သား (အစောင်းပါးပါးလေး လှီးပါ)
၅။ ကြက်သွန်နီ – ၃လုံး (၄စိပ်စိပ်ပါ)
၁။ ကြက်သားကို ဆား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း)၊ ကြက်ဥအနှစ်၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် တုို့ထည့်ပြီး သမအောင် နုယ်ပါ။
၂။ ပြီးလျှင် ကော်မှုန့် (စားပွဲတင်ဇွန်း ၆ဇွန်း)ကို ပန်းကန်လုံးတစ်ခုထဲထည့်ပြီး ရေမြုပ်ရုံထည့်ပြီး ကော်မှုန့် အနည်ထိုင်သည်အထိ နာရီဝက်ခန့်ထားထားပေးပါ။
၃။ ပြီးမှ ကော်မှုန့်စိပ်ထားသော ပန်းကန်ထဲမှ အပေါ်က ရေကြည်ကိုထုတ်ပြီး ကျန်တဲ့ ကော်မှုန့်တွေကို ကြက်သားနယ်ထားသော ထဲသို့ထည့်ပြီး သမအောင် နယ်ပေးပါ။
၄။ ထို့နောက် ဒယ်ထဲ ဆီများများထည့်ပြီး ဆီပူလာလျှင် နုယ်ထားသော ကြက်သားများကို ၄သုတ်ခွဲပြီး အညှိရောင်သန်းသည်အထိ ကြော်ပေးပါ။
၇။ ကြက်သားချိုချဉ်ကြော် မကြော်မီ ဆော့ရည်တွင် ပါဝင်သောပစ္စည်းများ (ဗီနီဂါ၊ ပဲငံပြာရည်၊သကြား၊ရေ) အားလုံးကို ရောမွှေပြီး ခွက်တစ်ခုထဲ ထည့်ထားပေးပါ။
၁၀။ ပြီးမှ ကြော်ထားသော ကြက်သားများ နှင့် ဆော့ရည်တို့ကို ထည့်ပြီး ဟင်းရွက်များနှင့် ရောမွှေလိုက်ပါ။
၁၂။ အရသာအလွန်ကောင်းမွန်သည့် ကြက်ချိုချဉ်ကြော်ကို ထမင်းပူပူလေးနှင့် မြိန်ရှပ်စွာ စားသုံးနိုင်ပါပြီး….
on June 1, 2010 at 8:56 am | Reply hmone
wow yummy foods again…i wanna eat..i only ate from chinese restaurante before never try…heee new house move ma bae try top mal thx pig yee
on June 1, 2010 at 9:19 am | Reply chowutyee
ကိုယ်လုပ်စားဖြစ်အောင် လုပ်စားကြည့် တရုတ်စားသောက်ဆိုင်က လက်ရာ အတိုင်းပဲ.. ဟီးဟီး…🙂
on June 1, 2010 at 2:29 pm | Reply aungyezaw
အစ်မ ရိပ်သာက ပြန်ထွက်လာတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်စားဖူးတဲ့ ကြက်ချိုချဉ်ကတော့ ကြက်သားစင်းကောလုပ်ပြီး အလုံးကလေးတွေလုပ်တာ။ နောက်ကြက်ဥအနှစ်က ဘာလို့ထည့်ရတာလဲမသိဘူး၊ ကော်မှုန့်ထည့်ရင်စေးသွားတာ ပဲမဟုတ်ဘူးလား။ ဆရာလုပ်တယ်တော့ မထင်ပါနဲ့။ ပုံကတော့ စားကောင်းမယ့်ပုံပါပဲ။ လုပ်မစားဖူးလို့ မေးကြည့်တာပါ။😛
on June 2, 2010 at 1:39 am | Reply chowutyee
Ko Aung Ye Zaw, ကြက်ဥအနှစ်ထည့်ရင် ကြော်တဲ့အခါ ပိုပွရွရွလေး ဖြစ်တာမို့ ထည့်တာပါ။ စားလို့တော်တော်ကောင်းပါတယ်၊ လုပ်စားကြည့်ပါအုန်းနော်..🙂
on August 30, 2010 at 4:37 pm | Reply Mein Mein
on August 31, 2010 at 4:08 am | Reply chowutyee
Mein Mein ဒီ ကြက်ချိုချဉ်က အရမ်းစားကောင်းတယ်.. လုပ်စားကြည့်ပါနော်..🙂
on November 23, 2010 at 2:19 pm | Reply lue
hi wutyee,i tried it. very tasty. many thz for your receipe.🙂
on November 24, 2010 at 3:21 am | Reply chowutyee
Lue ကိုလည်း ကျေးဇူးပါနော်.. တခြားဟင်းချက်နည်းတွေလည်း ချက်ကြည့်ပါအုန်းနော်… သိချင်တာ ရှိရင်လည်း မေးနိုင်ပါတယ်..😛
on February 23, 2011 at 11:20 am | Reply MinMinZaw
၀တ်ရည်ရေ..၀တ်ရည်နည်းနဲ့ အခုဘဲ ကြက်ချိုချဉ် ကြော်စားပြီးပြီ..စားကောင်းလွန်းလို့ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့တောင်မေ့သွားတယ်..အရမ်းကောင်းတာဘဲ..ဆိုင်ကကြော်တဲ့အတိုင်းဘဲ (အမှန်တကယ်က ဆိုင်ကထက်ပိုကောင်းတယ် :D)..
on May 11, 2011 at 5:46 pm | Reply mimilay
on May 28, 2011 at 9:04 am | Reply the red
ချိုချဉ်ကြော်မှာ အရောင် ထည့်ချင်ရင်ဘာထည့်ရမလဲ ပြောပြပါအုံး
ဆိုင်တွေမှာဆို အရောင်က အနီရောင် လေး မို့လို့
on May 30, 2011 at 6:25 am | Reply chowutyee
ချိုချဉ်ကြော်မှာ ခရမ်းချဉ်သီးဆော့ ထည့်ထားလို့ နီနီလေး ဖြစ်နေတာ..
on December 18, 2011 at 12:17 pm | Reply sau gerald
on December 20, 2011 at 2:58 pm | Reply chowutyee
on February 3, 2012 at 10:16 am | Reply sau gerald
on February 5, 2012 at 4:24 pm | Reply chowutyee
၀က်သားလုံးချိုချဉ် ချက်နည်းတင်ပေးလိုက်ပါ့မယ်နော်.. တချုိ့လည်း နာနတ်သီးထည့်ပါတယ်.. ကျေးဇူးပါ..🙂
on February 3, 2012 at 10:18 am | Reply sau gerald